Kugadzirira kuvhara mwedzi mukuru wezviziviso zve AMD - uye kuvhura musuwo wenguva inotevera yezvivakwa kukambani - AMD yakaputira hurukuro yayo yekupedzisira yemwedzi nekuzivisa Radeon RX 6000 makadhi emakadhi evhidhiyo. Yakagadzirirwa zvakare na AMD CEO Dr. Lisa Su, AMD's-awa-refu chirevo chakaburitsa zvikamu zvitatu zvekutanga mu AMD's nyowani RDNA2 yekuvakisa vhidhiyo kadhi mhuri: iyo Radeon RX 6800, 6800 XT, uye 6900 XT. Musimboti weiyo AMD nyowani yekupedzisira-yekupedzisira vhidhiyo kadhi mutsara, AMD zvinoreva kurwa neakanakisa ezvakanakisa kunze kweye arch-anokwikwidza NVIDIA. Uye isu tichaona yekutanga-ruoko kana AMD ikakwanisa kutora musika wepamusoro-soro munaNovember 18, apo makadhi maviri ekutanga akarova masherufu ekutengesa.
AMD iri kuuya vhidhiyo kadhi kuvhurwa yanga iri nguva yakareba iri kuuya yekambani, uye imwe yavanenge vachiseka zvakanyanya zvakanyanya. Ye AMD, iyo Radeon RX 6000 nhepfenyuro inomiririra kupera kwekuyedza kubva mhiri kwekambani sezvo munhu wese kubva kuboka rekuvaka reGPU uye semi-tsika SoC timu kune iyo Zen CPU timu yatamba chinhanho mukuvandudza AMD yazvino GPU tekinoroji. Nguva yose iyi, aya makadhi matsva ndiwo mukana wakanakisa we AMD mune ingangoita hafu yegumi yekupedzisira kusvika kunaNVIDIA kumagumo ekupedzisira emusika wekadhi revhidhiyo. Saka zvinonzwisisika, kambani iri jazzed - uye mune inopfuura nzira yekushambadzira - nezve zvinorehwa neRX 6000.
Kunamatira makadhi matsva ndeye AMD's RDNA2 GPU yekuvakisa. RDNA2 iri kuvhura padhuze-panguva imwe chete pazvipenga uye makadhi evhidhiyo ePc mwedzi unouya, uko uchave musana wemamwe mamirioni mazana maviri emitambo yemavhidhiyo emitambo pamwe nema AMD GPU mazhinji nemaAPU anouya. Saizvozvo, AMD yaburitsa zvimire zvese mukugadzira, kuunganidza zvivakwa zviri pamucheto wezvinhu zvehunyanzvi senge ray yekutsvaga uye DirectX 200 Yekupedzisira rutsigiro, nguva yese iyi vachishandisa zvinhu zvakawanda zvavakadzidza kubva kuZen yavo yakabudirira. CPU mapurani ekuwedzera mashandiro eRDNA12 RDNA2 zvakare isingawanzoitika mukuti haisi kuvakwa pamaitiro matsva ekugadzira, saka ichiuya kubva ku AMD's yekutanga RDNA (2) dhizaini uye makadhi evhidhiyo akabatana, AMD iri kuvimba nekuvandudzwa kwekuvaka kuti iunze zvese zvavanoita. Chokwadi, ndeye AMD's RDNA1 yekuvakisa ichagadzira kana kutyora makadhi avo matsva.
Kwemwedzi iri kuuya, RDNA2 inozadza pasi kuita nhamba inowedzera ye AMD chip dhizaini. Asi ikozvino, muPC nzvimbo, AMD iri kutanga nemakadhi evhidhiyo anofarira. Yekutanga RDNA2 GPU kunze kwemabasa ndiNavi 21 - AKA "Big Navi" - iyo AMD ichave ichishandisa sehwaro hwevatatu vemakadhi evhidhiyo. Aya ndiwo maRadeon RX 6900 XT, 6800 XT, uye 6800 zvichiteerana. Nemakadhi aya achangoburwa, AMD iri kunangana padhuze paNVIDIA ichangobva-kuvhurwa GeForce RTX 30-dzakateedzana mutsara, ichida kusangana (kana kurova) iyo RTX 3090, 3080, uye 3070 zvichiteerana. Zvakaringana kuti zviti, AMD haina kukwanisa kuenzanisa makadhi epamusoro eNVIDIA kwemakore akati wandei izvozvi, saka izvi zvivindi zvekushinga kubva kukambani yakadzidzira zvakare kushinga kwazvo mumakore mashanu apfuura.
AMD Radeon RX Series Kutsanangura Kuenzanisa
Kuwedzera Clock 2250MHz 2250MHz 2105MHz 1905MHz
Kupinza (FP32) 20.6 TFLOPs 18.6 TFLOPs 13.9 TFLOPs 9.75 TFLOPs
Infinity Cache 128MB 128MB 128MB N / A
Yese Bhodhi Simba 300W 300W 250W 225W
akitekicha RDNA2 RDNA2 RDNA2 RDNA (1)
Kutanga Musi 12 / 08 / 2020 11 / 18 / 2020 11 / 18 / 2020 07 / 07 / 2019
Kutanga Mutengo $999 $649 $579 $399
Sezvo chiziviso chanhasi chisiri chakazara tech yakadzika kudhiza - sekuzivisa kweZen 3, kudzika kwakadzika kuchaswedera pedyo kuvhura - AMD iri kungogovana zvimwe zvepamusoro-soro zvinongedzo zvemakadhi matsva. Asi neruzivo rwehuwandu hweCUs, ndangariro rutsigiro, uye simba rekushandisa parizvino, isu tine zano rakanaka rekuti chii chiri kuunzwa ne AMD patafura, uye nei vachitenda iyo RX 6000 nhepfenyuro ichaita zvakare kuti ive yakazara-kukwikwidza pa iyo yepamusoro-magumo.
Pakati pekadhi revhidhiyo ye AMD, kambani iri kutora yakada kufanana neNVIDIA. Saka kunyangwe iyo RX 6900 XT iri yehunyanzvi chikamu chavo, pa $ 999 ichiri mune yakafanana "yakawanda mari kupfuura pfungwa" chikamu seRTX 3090 - ndiko kuti AMD iri kutsvaga kubhadharisa yakanaka kadhi. Sezvo yakavakirwa pane yakazara-inogoneswa (uye pasina mubvunzo yakanyanya kubhinwa) Navi 21 GPU, ndicho chikamu chakaomesesa kuti AMD ibudise, uye nekudaro iyo isingawanzo. Izvo zvisingawanzo kuramba zvichionekwa, asi saNavi 21 pasina mubvunzo chip hombe nekutenda kune 26.8 bhiriyoni transistors dzimba 80 CUs uye 128MB Infinity Cache (zvimwe pane izvo gare gare), ini handitarisiri AMD ichange ichizadza musika ne6900 XTs chero nguva munguva pfupi.
Chero zvazvingava, iyo kadhi ichave yakazara Navi 21 chiitiko. Ese ma80CU anozogoneswa, uye nekutenda kuyedza kwe AMD mukugadzirisa dhizaini yeRDNA2 yemawachi, ichave newachi yemutambo ye2015MHz uye yepamusoro turbo wachi (yekuwedzera wachi) ye2250MHz. Kufunga kuti AMD haina kuita chero chinhu wo kupenga neiyo RDNA2 dhizaini, izvi zvinoreva kuti kadhi rinenge riine avhareji FP32 shader kuburitsa kwakatenderedza 20.6 TFLOPS, inopfuura zvakapetwa kaviri kuburitswa kweRX 5700 XT - uye zvichiteerana chaizvo nezvinangwa zve AMD kupeta kuita kwavo pamusoro peiyo RX 5000 nhevedzano. .
Padivi rekurangarira zvinhu kadhi rinouya ne16GB yeGDDR6. AMD haisi kuburitsa zviri pamutemo ndangariro nguva, asi zvichibva pane zvazvino tekinoroji maitiro isu tiri kutarisira kuti GDDR6 ichange ichimhanya pa16 Gbps / pini (iyo kubvira AMD yakasimbisa). Zvichakadaro, zvichibva pane mamwe masiraidhi eADD, zvinoita sekunge ndangariro iyi yakasungirirwa kune 256-bit memory bus, iyo yaizopa kadhi yakazara memory bandwidth ye512GB / sec. Izvi zvinobvumirwa kuti zvishoma kushomeka kwekadhi yevhidhiyo inoratidzira, uye ndipo pachauya tekinoroji nyowani ye AMD yeInfinity Cache.
Pakupedzisira, AMD inoti iyo kadhi ichave iine Total Board Power (TBP) ye300W. Panguva iyo vagadziri veASIC kwese kwese vari kunetsekana nekuchengeta magetsi - uye kana makadhi epamusoro eNVIDIA akarova 350W - 300W TBP chinhu chakakosha. Kwete chete iyo inogona kuve mukana wekukwikwidza weADD, asi zvinoreva kuti ivo havana kudikanwa kuti vawedzere yavo TBP maringe neyavo yapfuura yepamusoro-magumo kadhi, iyo zvakare 7nm-yakavakirwa Radeon VII.
Nezvese izvo zvataurwa, zvisinei, kumwe kutarisira kutarisira kuri muhurongwa. Kunyangwe AMD ichifananidza iyo RX 6900 XT neNVIDIA's RTX 3090, kune mashoma mashecha anogona kuve nawo. Tichapaza zvakataurwa neADD uye mabhenji ekufananidza gare gare, asi zvinokwana kutaura uye sezvo AMD iri kukanda zvinhu izvozvi, kana iyo RX 6900 XT ichigona kufanana ne3090, ichave iri kumucheto wepamusoro wekadhi re AMD. mashandiro ehunhu, kuwedzeredza kwakabatanidzwa. Izvo zvaizoenda-pamwe-neruoko neinorema binning yambotaurwa.
Kufamba pasi netambo isu tine iyo Radeon RX 6800 XT. Kubva pane yakatemwa zvishoma Navi 21 GPU, iri kadhi re AMD iro vanhuwo zvavo vanokwanisa. Pa $ 650 ichiripo dhura, kutaura zvishoma, asi zvakanyanya kuderera pane iyo $ 1000 6900 XT.
Kunze kwebhokisi, iyo RX 6800 XT inouya ne72 CUs inogoneswa. Yakasanganiswa nemawatchpeeds akafanana neiyo RX 6900 XT - mutambo wachi we2015MHz uye yekuwedzera wachi ye2250MHz - uye ichimirira mamwe mahunyanzvi ruzivo kubva ku AMD, iyo kadhi inofanirwa kuenzana kutenderera 18.6 TFLOPS yeFP32 shader kuita. Yakanangana neiyo RX 5700, iyi ingori pasi pe2x mashandiro eiyo AMD yekupedzisira-gen kadhi rinotungamira.
Kunze kwekudzikiswa kweCUs, zvinoenderana nezvinotaurwa neADD hapana mimwe misiyano inozivikanwa pakati peRX 6800 XT neRX 6900 XT. Iyo inodhura kadhi kadhi ichiri kuuya ne16GB yeGDDR6 ndangariro, uye ndinotarisira kuti ichavharwa pa16 Gbps / pini futi, ichipa iyo inotarisirwa yakazara bandwidth ye512GB / sec. Kuwedzera izvi, semakadhi ese wanhasi, ichave 128MB yeiyo Infinity Cache ye AMD. Zvichakadaro iyo kadhi TBP inotakura imwechete 300W chiyero seiyo 6900 XT futi.
AMD iri kuisa kadhi iri yakanangana neNVIDIA's RTX 3080; uye kusiyana ne6900 XT, hapana maasterisks ekutaura pamusoro apa. Saka kana AMD ichigona kununura pane zvavanotaura, saka iyi 6800 XT ichave ichiita zvakadaro kunze kwebhokisi. Muchiitiko ichocho, kusangana ne3080 mukuita uye pamwe uchirova mukushandisa kwesimba kungave kukunda kukuru kweiyo AMD uye iyo yekuvakisa yeRDNA2, uye chiratidzo chekuti vasvika sei mumakore mashoma apfuura.
Pakazara, zvakapihwa AMD kuita kwekutarisira uye mitengo, pamwe nemakwikwi anotarisirwa, hazvishamise kuti AMD yakatungamira nekadhi rino nhasi reRadeon key. Chaizvoizvo haisi mureza, asi seRTX 3080 padivi raNVIDIA, ichave iri kadhi rinocherekedza zvakanyanya.
Ichave iri yekupedzisira kadhi mune ye AMD's nyowani chigadzirwa stack, zvisinei, izvo zvichaunganidza zvakanyanya kwazvo mukutengesa. Kutenderedza Navi 21 trio yemakadhi isu tine iyo Radeon RX 6800, imwezve yakatemwa-pasi Navi 21 chikamu icho chinotengesa kubva kudonha mukuita kwekushandisa kwakaderera kwesimba uye mutengo unodhura $ 579 mutengo.
Iyo RX 6800 inozotakura iine 60 CUs (3 shader engines) inogoneswa, uye neyechina shader injini yakaremara, izvi nekuwanda zvinoita kuti zvive zvikamu zvitatu zveNavi yakazara 21. Zvichienderana nemamwe makadhi, mawachi ewachi achange akaderera , Ine mutambo wachi we1815MHz uye yekuwedzera wachi ye 2105MHz. Iyo, pamasvomhu edu, yaizopa kadhi 13.9 TFLOPS yeFP32 shader kuita, kana kutenderedza 75% yeiyo shader kuita kweRX 6800 XT.
Zvinotoshamisa kuti AMD haisi kudhizaina kugadzirisa kwavo ndangariro pano. Kunyangwe iri yechitatu uye yakawanda kadhi bhajeti-iri mushe, iyo vanilla RX 6800 ichiri ngarava ine 16GB yeGDDR6 memory. Uye apo ini ndichifungidzira AMD ichaenda nemutengo unodhura 14Gbps pano - ichipa iyo kadhi 448GB / sec yebandwidth - ichiri chiyeuchidzo chakazara. Saizvozvo, AMD haisi kushandisa yekumusoro-wachi chiyeuchidzo chero; kunyangwe iyo RX 6800 inowana yakafanana yepamusoro-tier 16 Gbps / pini ndangariro (uye zvichikonzera 512GB / sec yekurangarira bandwidth) ayo mamwe makadhi ari kuwana. Uyezve iyo yakazara 128MB Infinity Cache ichave ichiwanikwa zvakare, saka iyo GPU pachayo ichine dziva rakazara renzvimbo yayo inokurumidza yemuno-ruoko.
Zvakajairika kumakadhi epasi-tier, iyo RX 6800 zvakare inotakura yakaderera TBP chiyero che250W, 50W pasi peiyo RX 6800 XT. AMD zvirokwazvo haisi mweni kupa makadhi ane simba-zhinji, asi mune dzimwe nzira iyo RX 6800 ichave iri inonakidza kwazvo muboka, sezvo ichave iri yedu yekutanga mukana kutarisa izvo zvinoita RDNA2 pane zvine musoro TBP.
Kwechinguva, AMD iri kuronga mashandiro eRX 6800 zvinoenderana neNVIDIA's RTX 2080 Ti. Muchokwadi iyi iri kadhi iro (rinokwikwidza) richakwikwidza neRTX 3070 - iro iro kadhi rakatsiva iyo RTX 2080 Ti - asi sezvo RTX 3070 isingavhure kusvika mangwana, AMD haina kadhi ravanodhonza maapuro-ku -apples kuenzanisa kupikisana. Saka kwechinguvana, AMD irikutamba neyechinhu chinoshanduka chekuenzana.
Nekutanga kwe AMD kusiri kuuya kusvika Mbudzi 18th, kuchine nguva yakawanda ye AMD kuronga mashandiro ekadhi iri maererano neRTX 3070, saka zvichave zvinonakidza kuona izvo (kana paine chinhu) chavanofanira kutaura munguva yevhiki. Zvekushambadzira zve AMD zvinoisa iyo RX 6800 pamberi peiyo RTX 2080 Ti, asi isu tichaona kana izvozvo zvichinyatsoitika kune iyo RTX 3070 futi. Parizvino, AMD inoita kunge ine chivimbo chekuti vari kuzorova kadhi yakachipa yakachipa yeNVIDIA RTX-30, uye neyakafungidzirwa mashandiro uye hutungamiriri hweVRAM vatengesa iwo zvinoenderana ne $ 579.
Imwe yekuda kuziva pakuisa ndeyekuti AMD iri kusimudzira iyo RX 6800 sekadhi rekutamba re4K, kungofanana nehama dzayo dzine simba. Kushanda mukubatsira kwekadhi, iyo 16GB yeVRAM zvinoreva kuti ine ndangariro zhinji kubata mabhaudhi mahombe anouya nesarudzo yepamusoro. Nekudaro sezvo kadhi riine chete 75% yeiyo RX 6800 XT's theoretical shader performance, ndinoshamisika kana ichanyatso kumhanyisa zvakakwana kune 4K nekufamba kwenguva. Yazvino-chizvarwa mitambo inofanirwa kuve inogona kuitika, kutonga kubva pane izvo zvinogona kuitwa neRTX 3080 neRTX 2080 Ti, zvisinei pane kumwe kunetsekana pamusoro pekufamba kwenguva sezvo vavaki vemitambo vachichinjira kune anotevera-gen consoles sekuita kwavo uye maficha ekutanga. Muchiitiko ichocho, iyo RX 6800 inozove iri AMD's 1440p yemitambo yekutamba, uye zvakakodzera kuti kambani yakaburitsa mamwe 1440p mashandiro emasiraidhi eiyo kadhi padhuze ne4K mashandiro emasiraidhi.
Pakazara, AMD zvimwe zvinangwa zvekuita zvinangwa zveiyo Radeon RX 6000 akateedzana emakadhi. Panguva ino AMD inoziva chaizvo mhando yemabasa avanoda kuendesa kutora paNVIDIA yekumusoro-kumagumo, uye kambani inotenda kuti Navi 21 GPU yavakavaka ingori chishandiso chekuita izvozvo. Iye zvino nemavhiki matatu ekuenda kusvika yekutanga RX 3 makadhi akateedzana, ingori nyaya yenguva kusvikira taona ruoko rwekutanga kana AMD ichikwanisa kupa pane izvo zvinoshuvira, RDNA6800-yakavimbiswa vimbiso.